शिला स्तम्भ निर्माण समिति गठन
पर्यटन मञ्जरी बलामी
उत्तरी मकवानपुरको थाहा नगरपालिकाको पालुङ बहुमुखी क्याम्पसमा शिला स्तम्भ निर्माण समिति गठन भएको छ । उत्तर बहादुर गोपालीको संयोजकत्वमा ५ सदस्यिय शिला स्तम्भ निर्माण समिति गठन भएको हो । उत्तरी मकवानपुर कै एक मात्र क्याम्पस पालुङ बहुमुखी क्याम्पसमा शिला स्तम्भ निर्माण गर्ने उदेश्यले समिति गठन गरि कार्य प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । सदस्यहरुमा चिनिमाँया कार्की, मुकेश गोले, अर्जुन के.सी. र मधुसुदन रायमाझी चयन भएका छन । क्याम्पसमा आइतबार बसेको बैठकले बि.स. २०६८ सालमा क्याम्पसले गरको सप्ताहमा बिद्यालयलाई सहयोग गर्ने दानबिर दाताहरुको शिलालेखमा नाम लेखी शिलास्तम्भ निर्माण गर्न लागेको हो ।
दान दिने दानबिर दाताहरुको नाम लेखिने क्याम्पस प्रमुख रामहरी अधिकारीले बताए । क्याम्पस ब्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष ईश्वरनाथ पौडेलका अनुसार हाल सम्म सहयोग गर्ने ८ सय जना दानबिर दाताहरुको शिला लेखमा नाम लेखिने र निर्माण अवधिसम्ममा बढ्न पनि सक्ने जनाइएको छ । साथै बैठकले निरञ्जन अधिकारीको संयोजकत्वमा ३ सदस्यिय अनुगमण समिति समेत गठन गरेको छ । अनुगमण समितिको सदस्यमा श्याम भक्त श्रेष्ठ र रामहरी अधिकारी रहेका छन । पालुङ बहुमुखी क्याम्पसमा हाल मानबिकी र ब्यवस्थापन संकायमा अध्ययण अध्ययापन भैरहेको छ ।